Ukuphupha i-sacristy Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha i-sacristy. Kwiimeko ezininzi amaphupha kukuqhubekeka nje kweziganeko zosuku. Kodwa zithetha ntoni? Funda ukuze ufunde ngakumbi.
I-sacristy ligumbi elisecaleni lecawa. Kulapho kugcinwa khona yonke into efunekayo kwinkonzo yonqulo. Umzekelo, apha unokufumana izambatho zababingeleli kunye neeacolyte, iikomityi, iikomityi zokubamba, ikhandlela, imibhiyozo yomthendeleko kunye newayini eninzi, kunye namakhandlela.
Kungenxa yoko le nto kukho iikhabhathi ezininzi ezingxoweni, ezisetyenziselwa ukugcina ezi zixhobo kunye neempahla. Ezona zinto zixabisekileyo zigcinwa kwindawo ekhuselekileyo. Ukongeza, i-sacristy isebenza njengegumbi lokulungiselela labo bathatha inxaxheba kule nkonzo, njengababingeleli, abafundisi okanye ii-acolyte (i-altare boy). Oko kubizwa ngokuba yi-sacristan inoxanduva lwe-sacristy.
1 Uphawu lwephupha «sacristy» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «sacristy» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «sacristy» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «sacristy» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha «sacristy» inokuthi, ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, ibhengeze umbhiyozo wosapho. Nokuba umntu ophuphayo ukwi-sacristy ngelixa elele, imibhiyozo yosapho iya kumlindela kungekudala. Oku kuya kuba mnandi kuye kwaye uya kuchitha iiyure ezithile zonwabe.
Ejongwa njengegumbi elisecaleni lecawa, umfanekiso ofana nephupha we-sacristy usenokubonisa ukuba umphuphi ufuna impendulo. Ungaphakathi el mundo Ngokwenyani kwimeko ojonge kuyo isikhokelo, ulangazelela okanye ufuna injongo ebomini bakho. Nabani na ozibona engumbingeleli kwi-sacristy kufuneka akulungele ukwenza uxanduva kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba umntu ophuphayo ubona umbingeleli ebeka ingubo yakhe kwi-sacristy ngelixa elele, oku kungabonisa ixesha lotshintsho okanye lotshintsho olele kulo.
Uphawu lwephupha «sacristy» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha elithi "sacristy" kubonisa ukuba kunxulumene ngokusondeleyo "necawa." Ke ngoko, iphupha malunga ne-sacristy linokutsalela ingqalelo kwisimo senkolo yakho nakwezinye iinkolo. Oku kufuneka kujongwane nako ngokusondeleyo nomphuphi kubomi bakhe bemihla ngemihla.
Kuba iimpahla nezixhobo eziyimfuneko elunqulweni zigcinwa kwi-sacristy, kufuneka umntu aqwalasele ngqo ukuba ingaba ezi zinto ziyabonakala na emaphupheni. Kuba imikhondo enomdla ngakumbi kumyalezo wephupha unokuvela koku.
Umzekelo, ukuba ubona indebe kunye nesitya semikhosi etafileni ngelixa ulele, umxholo wephupha unokubhekisa emfazini njengophawu lokukhulelwa.
Ukuba iphupha ngokwalo lifaka izinto zecawa ezixabisekileyo kwindawo ekhuselekileyo okanye kwikhabhathi yeesakristy, ihlala ifuna ukufihla imeko yayo yenkolo kwabanye abantu okanye ukuyigcina iyimfihlo. Kuba oleleyo woyika ukuzenza isidenge phambi kwabanye abantu.
Uphawu lwephupha «sacristy» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo lokuchazwa kwephupha, isimboli se-sacristy sinokucela umntu oleleyo ukuba amkhathalele kubalulekile kwaye iyahambelana nezimvo zabo ezisisiseko.